MonsterConnect: Bixi Kooxdaada Iibinta si aad uxirto, oo aadan u garaacin | Martech Zone
Markii aan ka soo shaqeeyay shirkado badan oo SaaS ah oo leh kooxo iib ah, waxaa si cad u muuqatay in koritaanka shirkaddu uu inta badan ku tiirsan yahay awoodda aan u leenahay wakiilladayada iibka xir meherad cusub. Xaqiiqdii lama yaabin, sidoo kale, in uu jiray xiriir buuxa oo u dhexeeya iibiyaha iibiyaha mugga wicitaanka dibadda iyo heerka iibkooda xiran.
Hadday taasi kaa siiso sawir maskaxeed qaar ka mid ah iibiyaasha iibka oo la hadlaya rajo 30-kii ilbiriqsi kasta oo aad taleefanka dhigto ka dib markii la diiday, taasi ma ahayn gebi ahaanba. Dhibaatada inteeda badan ma aysan garaacin taleefanka, dhab ahaantii waxay ku xirneed qof dhinaca kale. Nidaamyada otomaatig-garaacista ayaa kaliya qayb ahaan guuleysta dhowr sababood awgood:
Tikniyoolajiyadda dijitaalka ee otomaatiga ahi ma noqon karto maraan geedo taleefan.
Tikniyoolajiyadda dijitaalka ee otomaatiga ahi ma noqon karto la falgalaan iridjoogayaasha.
Tikniyoolajiyadda dijitaalka ee otomaatiga ahi ma noqon karto kala saar farriimaha codka iyo dardargelinta taleefanka.
Tiknoolajiyada kale ee halkaa ka jirta waxay u fidineysaa jadwalkaaga an jiilka hogaanka u baxa ee B2B shirkadda. Tani sidoo kale waa lagu guuleysan karaa, laakiin hadda waxay inta badan ku tiirsan tahay shaqaale dibedda ah si aad dan ugu hesho rajadaada. Waxay asal ahaan ubaahantahay laba wada hadal iyo laba beddelaad… mid si ballanta loo helo, ka kalena loo helo xir iibka.
MonsterConnect isku daraa codsi ku saleysan websaydh leh wakiilada nool wicitaanadaas oo ay barbar socdaan maamulayaasha wax iibintaadu. Maaddaama xiriiradaada qeexan la gaaro, waxay isla markiiba ku xiran yihiin iibiyahaaga iibinta waqtiga dhabta ah ee wadahadalka tooska ah. Kala-guurka wuxuu qaadanayaa qiyaastii laba-toban meelood meel ilbidhiqsi ah oo lama ogaan karo dhegta aadanaha!
Haddii kooxdaada iibintu ay isticmaaleyso Salesforce waxaad si fudud ugu gudbin kartaa xogta MonsterConnect's Istaraatiijiyada qalabaynta iibka ee isku-dhafan ee Salesforce. MonsterConnect waxay bixisaa hirgelinta furaha kaas oo ku biirin doona barnaamijkaaga xirfadleyda ah ama 'Salesforce' barnaamijka 'MonterConnect' ee ka baxa wicitaanka qalabka otomaatiga ah.
Kordhinta wada sheekaysiga tooska ah, MA garaacayso, waxay kordhisaa jiilka hogaaminaya iibka B2B
MonsterConnect waxay hagaajineysaa wax ku oolnimada maareynta waxqabadkaaga, waxay kordhisaa wax soo saarka kootada kooxdaada iibka, oo si wax ku ool ah ayey u dhexgashaa xisaabaadkaaga muhiimka ah. Kooxdaada iibka waxay ku sii joogi karaan hawsha - iibinta - waxaana lagu siin karaa cabirro sax ah oo lagu cabbiro wax soo saarkooda. Mar dambe iibiyahaaga iibiyaha ma yeelan doono maalin xun maxaa yeelay ma aysan qaban karin qofna… hadda waxay heli doonaan rajo qabasho maalinta oo dhan waxayna sameyn doonaan waxa ay ku fiican yihiin… xiritaanka.
MonsterConnect sidoo kale waa kafaala-qaade cusub oo ku saabsan Martech Zone!
Tags: auto-wacidtikniyoolajiyadda auto-dialerb2bb2b hogaanka genjiilka hogaaminta b2biibinta b2bJiilka iibka B2Bteknoolojiyada wicitaankawakiilka noolwuxuush xirmaanisku xidhkaiibinta tikniyoolajiyaddawicitaanada iibkawaxqabadka kooxda iibkaiibiyaha iibka
Finesse: Ku rakib, Ku dar Alaab, Samee Lacag.
Jul 3, 2015 markay ahayd 8:48 AM
Waxyaabo fiican !! Isbadal maskaxeed wanaagsan dhoola cadeynta iyo garaacista wax faa iido ah malahan hadaadan wadahadalka dhinaca kale ka heli karin. Waxaan dhihi lahaa tani waa jahwareerka kaliya ee ugu weyn ee iibiyaasha, codadka boostada iyo nidaamka auto-menu ee cuna waqtiga waqtiga…